U-2017 uya kuba ngunyaka weelaptops ezinazo Windows 10 kunye neetshipsi zeSpapdragon | Iindaba zeGajethi
Kwi-2017 siza kubona iilaptops nge Windows 10 kunye ne-Qualcomm's Snapdragon chip
Kwiminyaka eyadlulayo besingayi kucinga nokucinga ukuba i-smartphone okanye ithebhulethi inokuba ne-chip okanye i-SoC ekwaziyo ukujongana nezoPentiums zangaphambili okanye iiprosesa zamva. Kukuqhubela phambili kwetekhnoloji yeselfowuni ukuba amanye amagama amakhulu kuyilo lwe-chip ajika kwiikhompyuter zeekhompyuter.
Le yiQualcomm efikelele kwisivumelwano neMicrosoft yokuza kunyaka olandelayo Iilaptops eziza kuba nesibindi sabo Iichipsi zalowo mvelisi ubalulekileyo une-Android njengowona mgangatho mkhulu wokhuseleko. Ngenxa yokuqhubela phambili kwetekhnoloji, kuyinto eqhelekileyo ukuba iQualcomm igqibe kwelaptop.
Kwaye kungoLwesine odlulileyo iMicrosoft ibambe umsitho obizwa ngokuba yiWindows Hardware Engineering Community (WinHEC) apho I-Qualcomm yenze imbonakalo entle kwaye iyothusa. Ezi nkampani zimbini zibhengeze ukuba bazakubambisana ukuze bazise ngokupheleleyo Windows 10 amava kulungelelwaniso lomqhubekekisi weQualcomm, ukuqala ngeSpapdragon elandelayo.
Oku kubaluleke kakhulu ngenxa yezizathu ezininzi, kodwa ubukhulu becala kuba iiprosesa zeQualcomm bezisekwe kubuchule bokwakha obabusetyenziswa kwiikhompyuter zeekhompyuter zisasazwa ngeLinux. I-chip entsha ye-Snapdragon iya kuba yi-SoC yokuqala yohlobo lwayo ekusebenzeni kwenkqubo yokusebenza engama-64.
UMicrosoft noQualcomm bathi iilaptops ezineSnadpragon ziya kuba iyafumaneka kunyaka olandelayo. Ezi zixhobo zingasebenza Windows 10 kunye neenkqubo zayo ezinzima ngaphandle kweengxaki ezinkulu, kodwa ngoncedo lokubonelela uyilo oluncinci kunye nobomi bebhetri obude.
Idemo yaboniswa ngokwayo, apho iMicrosoft ibonisa iPC ene-Snapdragon yenza i-adobe photoshop isebenze, Enye yezo nkqubo yaziwa ngokusetyenziswa gwenxa kwezixhobo ezenziwa kwikhompyuter. Singaphantse sitsho ukuba i-chip ye-Snapdragon ene-835 idlulile ngenqaku elilungileyo ubuninzi bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Kwi-2017 siza kubona iilaptops nge Windows 10 kunye ne-Qualcomm's Snapdragon chip
Ngaba ukwibhulorho? Iimuvi zokubukela njengentsapho ngeNetflix
Ngoku unokukhuphela iphepha lewebhu ukuze ulisebenzise ngaphandle kweChannel